Tombontsoa amin'ny fakan-tsary an'ny Fitaovana Vatan'ny polisy | Vahaolana OMG
Tombontsoa amin'ny fakan-tsary an'ny Body-Worn
Amin'ny vanim-potoanan'ny fitandremana fatratra, ny fakantsary amin'ny karazan-javatra rehetra dia nanjary maso fahatelo izay hitan'izy rehetra sy voarakitra. Ny iray amin'ireo farany nampidirina dia ny fakantsary vatana, namboarina ho fampiasa amin'ny polisy, mba hisintonana ny fitondran-tenan'ireo mpiasa sy ny fotoana nanaovana heloka bevava. Na izany aza, ny fampiasana azy dia miitatra any amin'ny sehatry ny matihanina hafa ary na dia amin'ny sehatry ny fampianarana aza. Ity boom ity dia manokatra adihevitra vaovao momba ny be loatra na tsia ny fiambenana sy ny fiovana amin'ny fitondran-tena mifanaraka amin'izany.
Tsy isalasalana ny fahombiazana ho an'ny fakan-tsary noho ny fomban-doko amin'ny tenanao, miaraka amin'ny fiakaran'ny fakantsary mihetsika ary ny GoPro no fambara lehibe indrindra; ireo orinasa izay mijery polisy; fampiharana maimaim-poana mivantana izay mandefa mivantana ho an'ny rehetra; na fitaovana fiarovana teknolojia avo lenta miaraka amin'ny fanekena ny tarehy. Fotoana maro kokoa eo amin'ny fiainantsika no alain'ny fakantsary, noho izany dia mametraka fanontaniana vaovao ny dikan'ny hoe miaina araka ny fanaraha-maso izany.
Raha ny tena manokana, fakan-tsary na body cam no noraisina tsara tany amin'ny tanàn-dehibe maro, satria heverina ho fitaovana fanaraha-maso sy fatiantoka manohitra ny fahefan'ny polisy. Ireo dia fitaovana kely tsy manelingelina mifatotra amin'ny fanamiana an'ny agents amin'ny haavon'ny soroka, handraisana am-peo am-pitandremana nefa tsy manelingelina ny serivisinao isan'andro. Afaka maka sary mihetsika tsy tapaka izy ireo, miaraka amin'ny fahafaha-mampakatra horonantsary mandeha ho azy amin'ny rahona.
Na dia mifehy aza ny fifehezana sy ny asan'ny mpitandro filaminana matetika eo amin'ny manodidina sarotra, ny video dia lasa manampy betsaka amin'ny fampiharana ny lalàna. Miaraka amin'ny tady amin'ny fanamiana eo amin'ny tratrany, fakan-tsary amin'ny zoro ny halehiben'ny walkie-talkie dia hahafahan'ny polisy sy ny zandarimaria hanao sary mihetsika ho azy ireo. Ny mari-pahaizana 360 azo zahana, ny mason-tsivana mivelatra dia afaka maka fisehoan-javatra na andro na alina, amin'ny asan'ny polisy izay miasa ny fitaovana miankina amin'ny toe-javatra. Raha hameno ny firafitry ny mpiasam-panjakana ataonay, ireo camera ireo dia manolotra ny fomba rehetra hanamarinana ireo trangan'ny fanamavoana sy hiantohana ny fahatokisan'ireo masoivoho mandritra ny fisavana sy fijanonana. Ny sary sy feo, voarakitra ao anaty karatra fitadidiana, dia alefa any amin'ny paositry ny polisy amin'ny CD-Rom. Ireo dia porofo avokoa ireo azo ampiharina amin'ny minitra mamaritra ny zava-misy ary afaka mamelona paikady amin'ny tombony toy ny
Ny fitaovana koa dia misy rindrambaiko manokana izay mitahiry sy mivoaka ireo rakitsoratra ary miaro ny karazana fanovana na fanovana. Ary raha ny halatra na fatiantoka dia omena mekanika mihidy ihany koa. Izy ireo dia mamela ny firaketana miaraka amin'ny hazavana ambany ary amin'ny toe-javatra faran'izay henjana.
Mazava ny tanjona satria mamela ny fakana ny fitondran-tenan'olon-droa - mety na tsia - ary rehefa misy ny asa ratsy. Saingy, ity karazana fitaovana ity dia tsy mahasoa fotsiny ho an'ny polisy. Any Azia, ohatra, ny fampiasana azy ho an'ny mpamono afo, mpiambina, fisafoana amoron-dranomasina, fanaraha-maso biby na eny amin'ny sehatry ny fanabeazana aza dia efa dinihina, fampitaovana talen'ny talen-tsekoly sy talen-tsekoly miaraka amin'ny fakan-tsary amin'ny taona ho avy mba hisoratra anarana ny fifandraisan'izy ireo amin'ireo mpampianatra sy mpianatra.
Ny fitaovana dia mamela ny fomba fandraisam-peo amin'ny fotoana tena izy. Natolotra avy hatrany izy ireo, manomboka mirakitra an-tsoratra ny fitaovana ary tsy azo vitan'ny tompon'andraikitra satria ny fampahalalana dia alaina amin'ny fotoana hiafaran'ny fifindrana, ao amin'ny iray amin'ireo ivotoerana famoriam-bola, izay rehefa tonga ny fotoana ilana azy dia ilaina ny mampifandray azy ireo ary manoratra mpampiasa. amin'izay eo amin'ny efijery dia azon'izy ireo atao ny misintona ireo rakitra mankany afovoan-afovoany ary mahita mialoha izay nataony tamin'ny fotoana sasany, nefa tsy afaka manova na mamafa ireny.
Amin'izany fomba izany ihany, ilay rakitsary dia mirakitra an-tsary maharitra HD feno (amin'ny tena fotoana), ny audio ary ny geolocation, izay midika fa any amin'ireo ivontoerana fanaraha-maso samihafa izy ireo dia hahalala vaovao ankapobeny momba ny hoe iza no mitondra azy. Tombontsoa hafa ny fampiasana ny horonantsary ho porofo any amin'ny fitsarana.
Ny fitaovana fananganana ilay fitaovana, ny ankapobeny dia manampy, mavesatra sy mahatohitra ny fahatafintohinana, satria amboarina izy ireo mba hanoherana ny hamafin'ny masoandro sy ny rano tsy misy fahombiazana.
Ny fakan-tsary amin'ny vatana dia azo ampiasaina ho fepetra fiarovana. Rehefa misy manao herisetra ary nolazaina fa voarakitra an-tsary na mahita ny fakantsary izy dia lasa fiovan'ny fitondran-tena, fiarovana fanampiny io. Ary koa, ny fanadihadiana dia milaza fa ny olom-pirenena dia hitondra tena tsara kokoa rehefa voarakitra an-tsoratra izy ireo.
Ny horonan-tsarin'ny fakantsary dia nitazona sy fehezin'ny Departeman'ny Polisy ary voatahiry amina mpizara azo antoka. Ankoatry ny vidin'ny fividianana ny fitaovana dia ny vidin'ny fitahirizana ny angon-drakitra.
Indrindra indrindra, ny angon-drakitra amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana dia naneho ny fihenan'ny fitarainana amin'ireo mpiasa, ary koa ny fihenan'ny lanjan'ny fampiasan'ny manampahefana. Ny sasany amin'ireo soa azo avy amin'ny fakan-tsary hita ao amin'ny firenena sy ny azontsika amin'izao fitiliana izao dia ny fitomboan'ny fangaraharana. Ny ampakarina rehetra dia ampirimina ary raha ny fampahafantarana ny besinimaro ary ny tompon'andraikitra mahalala izany dia tsara ny fihetsiky ny olona rehetra.
Ny horonantsary dia voarakitra avy amin'ny fomba fijerin'ilay manamboninahitra ary mahatratra 130 degre. Rehefa miseho eo amin'ny sehatra ireo masoivoho isan-karazany dia manana zoro isan-karazany ianao.
Ny fanadihadiana dia nanoro hevitra fa ny tontolo misy fakantsary fanaraha-maso bebe kokoa dia mety, amin'ny fomba iray, mahafinaritra sy azo antoka kokoa. Saingy rehefa mitombo ny tolotra ara-teknolojika, misy koa ny zavatra maro azo atao amin'ny fampiasana tsy misy dikany. Manampy izany ny ambovobonin'ny ara-dalàna. Niteraka resabe, ohatra, ny adihevitra momba ny fomba tokony hampiasan'ny polisy ny fakantsary raha azo ampiasaina na aiza na aiza izy ireo, na oviana no mamafa ny firaketana an-tsoratra.
Satria ireo teknôlôjia marimarina ireo dia tsy misy fepetra hentitra amin'ny fampiasana azy ireo, koa mety ho azontsika atao ny mitadidy amin'ny firaketana an-tsoratra na aiza na aiza alehantsika, tsy mila mifehy izay mahita ireo sary ireo. Saingy, mety hisy fiantraikany tsy ampoizina ny famoronana fiaraha-monina mahay mandefitra. Ary na dia mankasitraka ny asan'ny hafa aza isika.
Tombontsoa amin'ny fakan-tsary an'ny Body-Worn no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin
4567 Total Views 2 Views Today